2020 HPA Awards အတွက်အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်သူများအားကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ၂၀၀၀ HPA ဆုပေးပွဲအတွက် Engineering Excellence Recipients ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Los Angeles, CA. အတွက်နိုဝင်ဘာလ, 2019, 21 ရက်တွင် 2019 HPA ဆုများ (Ryan Miller / Capture Imaging ဓာတ်ပုံ။ )
အတွက်နိုဝင်ဘာလ, 2019, 21 ရက်တွင် 2019 HPA ဆုများ Los Angeles မြို့ CA. (Ryan Miller / Capture Imaging ဓာတ်ပုံ။ )
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် Professional Association (HPA) ဆုချီးမြှင့်ရေးကော်မတီသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် HPA ဆုချီးမြှင့်ခံရသူများအားအင်ဂျင်နီယာထူးချွန်မှုအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်။ အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်မှုအတွက် HPA ဆုအပါအ ၀ င် HPA ဆုများကိုနို ၀ င်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် virtual Gala ၌ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် ၀ င်ခွင့်အတွက်တရားစီရင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များကိုလိုက်နာရန်အဆင်ပြေခဲ့ပြီး၊ အလွန်လေးစားခံရသည့်ဂုဏ်ထူးများအတွက်တိကျသောစံနှုန်းများနှင့်အညီဆက်လက်ရှိနေခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းလိုပဲအပြာရောင်ဖဲကြိုးအကဲဖြတ်အဖွဲ့ကဒီတင်သွင်းမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်။ တရားသူကြီးတွေကိုကြိုတင်ပို့ပေးထားသည့်ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုနှင့်ဗီဒီယိုတင်ပြပြီးနောက်တရားသူကြီးများနှင့်“ တိုက်ရိုက်” တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
ယခုနှစ် 15 ခြေတစ်လှမ်းth ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာပါဝင်မှုနယ်ပယ်တွင်ဖန်တီးမှုအနုပညာနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်တည်ထောင်ခဲ့သော HPA Awards ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့။ အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသောမီဒီယာ၊ အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြီးအောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်မော်ကွန်းတိုက်တို့တွင်ထူးချွန်သောနည်းပညာနှင့်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုဆုချီးမြှင့်သည်။
HPA Awards အင်ဂျင်နီယာကော်မတီဥက္ကChair္ဌ Joachim Zell က“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ကြုံရတာအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ ၀ င်ရောက်လာသူအမြောက်အများရှိခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နီယာထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များ၏ထူးချွန်သောတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည်တင်ပြချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ခြွင်းချက်မရှိဘဲ, တိုင်း entry ကိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်စစ်ကြောစီရင်တော်မူသည်အစဉ်အဆက်ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအခိုက်အတန့်၌ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့်ကမ္ဘာချီအကျပ်အတည်းများပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်ကိုမချိုးဖျက်နိုင်သကဲ့သို့၊ ဆုရှင်များနှင့် ၀ င်ရောက်သူများအားလုံးကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြပါစို့။
အင်ဂျင်နီယာ Excellence များအတွက် 2020 HPA ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၏ဆုရရှိသူများမှာ:
EIZO: ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော CG3146 ၃၁.၁
EIZO ၏ Prominence CG3146 ၃၁.၁ R HDR မော်နီတာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးပါ ၀ င်သည့်စံကိုက်ညှိအာရုံခံကိရိယာပါရှိသည်။ အဆင့်မြင့်တောက်ပမှုနှင့်အရောင်တူညီမှုကိုပြုပြင်ခြင်းသည်မော်နီတာ၏ထိပ်တွင်ရှိပြီးအပူချိန်ကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်တည်ငြိမ်သော XYZ ဖန်ခွက်အာရုံခံကိရိယာတွင်ပါ ၀ င်စေရန်နည်းပညာများတီထွင်ခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဆူညံသံနှင့်အတူနိမ့်သောအရောင်အဆင်းareasရိယာနှစ်ခုလုံးနှင့်အလင်းပြည့်နှက်နှင့်အတူမြင့်မားသောတောက်ပသောဒေသများရှိနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုအတွက် algorithms အသစ်များလိုအပ်သည်။ စက်ပစ္စည်းလေ့လာမှုတွင် display တည်ငြိမ်မှုနှင့်စိတ်ကြိုက် ASIC နည်းပညာများသည်ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် LCD panel ၏အရောင်များကို ၂၂% ကျော်တိုးမြှင့်စေရန်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
Eluvio: Eluvio ပါဝင်သည့်အထည်
Eluvio သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးသူများကိုဗီဒီယိုဖြန့်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်းကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။ Eluvio ပါဝင်သည့်အထည်အလိပ်သည် CDN များ၊ cloud transcoding သို့မဟုတ် database များမပါ ၀ င်ဘဲအချိန်မီကမ္ဘာအနှံ့ရှိအလွန်နိမ့်ကျသည့်ဗီဒီယိုများပေးပို့နိုင်ရန်အတွက်ထိရောက်သော၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောကွန်ရက်တစ်ခုအနေဖြင့်ပလက်ဖောင်းသည်မီဒီယာ၊ သီးခြားဖိုင်မိတ္တူများသို့မဟုတ်ငြိမ်သက်သောဗားရှင်းများမပါ ၀ င်ဘဲအရည်အသွေးမြင့် streaming ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုသူအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ပါဝင်သည့်အရာများကိုပြောင်းလဲမှုပြုခြင်းကိုသီးသန့်ပြုလုပ်ပြီးဆော့ဝဲလ် blockchain contract များမှတဆင့်အခွင့်အရေးများကိုထိန်းချုပ်သည်။
Moxion Immediates သည်တီထွင်မှုများစွာ၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီးဖန်တီးမှုကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းအချင်းချင်းနှင့်ဗီဒီယိုများလုံခြုံစွာမျှဝေရန်နှင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်ပို့စ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ အယ်ဒီတာ့အာဘော်သို့မဟုတ် VFX လုပ်ငန်းအသွားအလာများသို့မ ၀ င်မီပြန်လည်ကြည့်ရှု။ မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် Moxion တိမ်ထဲသို့ QTAKE ဗီဒီယိုအထောက်အကူမှကင်မရာ၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့် VFX Wranglers ၏ metadata အချက်အလက်များနှင့်အတူချက်ချင်းရိုက်ကူးထားသောမှတ်တမ်းများ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဥပမာ VFX Previs Cuts ကိုစတင်တပ်ဆင်သောမော်နီတာများ၊ iOS စက်များသို့ပြန်ဖွင့်ရန် Moxion Cloud မှတစ်ဆင့် Video Assist သို့လုံခြုံစွာပြန်ထားရန်ပြန်ပို့နိုင်သည်။
Carl Zeiss SBE: eXtended အချက်အလက် - Lens metadata နည်းပညာ
ဓာတ်ပုံကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာလုပ်ငန်းစဉ်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန်။ ZEISS eXtended ဒေတာသည်ဒေတာ ၂ ခုကိုပေါင်းစည်းသည်။ Cooke အပေါ် အခြေခံ၍ အဓိကမှန်ဘီလူးအချက်အလက်များ၊ i-Technology နှင့် ZEISS ပုံပျက်ခြင်းနှင့်အရိပ်များထွက်သည့်မှန်ဘီလူးအချက်အလက်များ။ Set ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်များနှင့်အတူ ZEISS တီထွင်ထားသောမှန်ဘီလူး plugins ၏ suite ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုတိကျသော compositing နှင့်တည်းဖြတ်မှုအတွက် data များကိုထုတ်လုပ်ပြီးနောက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Frame.io နှင့် Sohonet တို့သည်၎င်းတို့၏ Camera-to-Cloud နှင့် ClearView Flex နည်းပညာများအတွက်အထူးဂုဏ်ပြုသောဖော်ပြချက်ရရှိခဲ့သည်။
အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအပြင်နို ၀ င်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော virtual ဆုများအရအရောင်ခွဲခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ အသံနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအပါအ ၀ င်ယာဉ်အမျိုးအစားတွင်ထူးချွန်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပါလိမ့်မည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်တရားသူကြီးများဆုချီးမြှင့်ခြင်းကိုဆုမတိုင်မီကြေငြာပြီးအစီအစဉ်အတွင်းတင်ဆက်လိမ့်မည်။
HPA နှင့် ၄ င်း၏ HPA ဆုပေးပွဲကော်မတီသည်အနုပညာရှင်များ၊ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိကုမ္ပဏီများအားအကြောင်းအရာများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးကူညီရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားဆဲဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်၏ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပါ ၀ င်မှုနှင့်ပူးပေါင်းပါ ၀ င်မှုကိုအားပေးရန်အပြောင်းအလဲများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လက်မှတ်တွေကိုအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးအခမဲ့ ၀ င်ခွင့်ပေးထားတယ်။ ထိုဆုများကိုပရိသတ်များအားညနေခင်း၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အားပေးသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင်ပေးလိမ့်မည်။
HPA Awards ဆုများကို Diamond Title Sponsor ၏ရက်ရက်ရောရောပံ့ပိုးမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း, Event Sponsors Dolby နှင့် Zeiss နှင့် HPA Awards မှတ်ပုံတင်ခြင်းစပွန်ဆာရုပ်ပုံဆိုင်။ စပွန်ဆာပေးသောသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်ကြော်ငြာအခွင့်အလမ်းများအတွက် Joyce Cataldo သို့ဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]။ HPA ဆုများနှင့် ဟောလိဝုဒ် Professional ကအစည်းအရုံးမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.hpaonline.com.
RED ဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ၏ KOMODO 6K S35 ကင်မရာစနစ်အသစ်ကိုယခုရရှိနိုင်သည် - အောက်တိုဘာလ 13, 2020
အင်ဂျင်နီယာ HPA ဖားအံဆု 2020-09-17
ယခင်: Bluefish444 သည် Adobe 8 Creative Cloud အတွက် KRONOS K2020.14.1 အထောက်အပံ့ကို Windows XNUMX Install Package ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်
နောက်တစ်ခု: NASA ၏ SpaceX # LaunchAmerica မစ်ရှင်အတွက်ကင်ပိန်း၏နောက်ကွယ်ရှိဖန်တီးမှုများနှင့်တွေ့ဆုံပါ